AC MILAN VS INTER MILAN: Shaxda & safafka ay fiidkii kusoo geli karaan! – Gool FM
AC MILAN VS INTER MILAN: Shaxda & safafka ay fiidkii kusoo geli karaan!
(Milano) 04 Abriil 2018 – Waxaa caawa jirta ciyaartii cuslayd ee Derby della Madonnina oo horay u baaqday 4-tii bishii hore ee Maarso kaddib geeridii kabtankii Viola ee Davide Astori.
Dhanka Milan: Macallinka Gattuso ayaa kulankan ugu yeerey 22 laacib. Waxaa soo laabtay daafaca Abate. Waxaa ganaax ciyaartan ku seegaya Biglia, oo lagu wado inuu booskiisa buuxiyo Montolivo dhanka khadka dhexe. Weerarku waa Cutrone oo ka horreeya Kalinic oo kuble noqday sanadkan.
Dhanka Inter: Macallin Spalletti ayaa caawa fiidkii doonaya inuu kusoo galo isla 11-kii uu ku diley kooxaha Sampdoria iyo Verona, iyadoo aan Inter wax gool ah laga dhalin 3-dii kulan ee ugu dambeeyay. Waxaa soo laabtay daafaca Ranocchia.
90 A. DONNARUMMA, 30 STORARI, 22 MUSACCHIO, 17 ZAPATA, 20 ABATE, 31 ANTONELLI, 73 LOCATELLI, 4 MAURI, 11 BORINI, 7 KALINIC, 9 ANDRE’ SILVA
27 PADELLI, 46 BERNI, 21 SANTON, 29 DALBERT, 13 RANOCCHIA, 2 LISANDRO LOPEZ, 20 BORJA VALERO, 17 KARAMOH, 11 VECINO, 23 EDER, 99 PINAMONTI
EEG: Zidane oo BIDAARTA salaaxday markii uu xalay Ronaldo dhaliyay LABAALEYDA...(Sawirro+Muuqaal)
BARCELONA VS AS ROMA: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!